Sida isku xirnaanta biibiile dabacsan, tuubada qaboojiyaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa kaydiyaha cadaadiska baabuurta iyo kuleylaha kaabayaasha ah. Si loo hubiyo in qaboojiyaha si habsami leh ugu qulqulo jirka kala -duwanaanta iyo waalka, geedka qariibka ah ee qaab -dhismeedka kanaalka hoose ee laanta badan ayaa lagu qaatay tuubada qaboojiyaha. The ...
Iibinta baabuurta korontada ee sannadkan ayaa iska caabinaysa Covid-19 oo ku dhacday suuqa baabuurta adduunka
Tirada gawaarida korontada ee waddada ayaa la filayaa inay gaaraan ku dhawaad ​​10 milyan sannadkan, iyadoo iibku sii kordhayo sannadkan in kasta oo uu jiro masiibada Covid-19, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay Wakaaladda Tamarta Caalamiga ah. Iibinta baabuurta korantada ayaa la filayaa inay ka fiicnaato guud ahaan suuqa baabuurta rakaabka, iyadoo EV ...
Tuubada silikoonku waxay qorshaynaysaa inay kor u qaaddo qiimaheeda dhammaan badeecadaha silikooyinka. Qiimaha kororku wuu kala duwan yahay 10-20%. Suuqa silicone-ka ayaa juqraafi ahaan loogu qaybiyay Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub, Aasiya-Baasifigga, Bariga Yurub, Koonfurta Ameerika iyo Bariga Dhexe & Afrika. Sanadka 2019, Aasiya Pa ...